မရည်ရွယ်ပဲကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်သောသူများအတွက် ထိရောက်မှု အရှိဆုံး သန္ဓေတားနည်းလမ်း ...! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မရည်ရွယ်ပဲကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်သောသူများအတွက် ထိရောက်မှု အရှိဆုံး သန္ဓေတားနည်းလမ်း ...!
မရည်ရွယ်ပဲကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်သောသူများအတွက် ထိရောက်မှု အရှိဆုံး သန္ဓေတားနည်းလမ်း ...!
Apann Pyay 1:35 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
သန္ဓေတားခြင်း နည်းလမ်းပေါင်း များစွာရှိပါသည်။ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် သန္ဓေတားမည်ကို ဆုံးဖြတ်သော အခါ မိမိ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ လိင်ဆက်ဆံသည့် အကြိမ်ရေနှင့် ကလေးလိုချင်စိတ်ရှိ/မရှိ စသည့် အချက် မြောက်မြားစွာပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ် ရပါသည်။
သန္ဓေတားနည်း တစ်ခုခုကို ရွေးချယ် တော့မည်ဆိုလျှင် မိမိ ရွေးချယ်မည့် နည်းလမ်းသည် ထိရောက်မှု ရှိရဲ့လားဟု စတင် စဉ်းစားရပါမည်။
မိမိ အသုံးပြု လိုသည့် သန္ဓေတား နည်းလမ်းသည် ထိရောက်မှု ရှိ/မရှိ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ် ပြီးသောအခါ နောက်တစ်ဆင့် အားဖြင့် ကုန်ကျ စရိတ်ကို စဉ်းစား ရပါမည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည် ရေရှည်တွင် မိမိ တတ်နိုင်သည့် ပမာဏ အတွင်း ရှိနေရန် လိုအပ် ပါသည်။ နောက်ထပ် စဉ်းစားရန် တစ်ခုမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- အသက် (၃၅)နှစ် ကျော်နေပြီ ဖြစ်သော အမျိုးသမီးသည် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါက သန္ဓေတား သောက်ဆေးများ သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ပါ။ အမျိုးသား ဖြစ်သူ၏ အခြေအနေ ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရပါမည်။ သင်၏ အမျိုးသားသည် သင်ရွေးချယ် သော သန္ဓေတားနည်းလမ်းကို ကျေနပ်လက်ခံသူဖြစ်ပါက သင့်အဖို့ ရွေးချယ်ရ လွယ်ကူ ပေလိမ့်မည်။
သန္ဓေ တားနည်းကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုမည်ဟူသော သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သင်ရွေးချယ်မည့် သန္ဓေ တားနည်းလမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ သင်သည် ယာယီသန္ဓေတားလိုပါက ထိရောက်မှု နည်းသော နည်းလမ်းများ ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်သက်လုံး သန္ဓေတားလိုသည်ဆိုပါက ထိရောက်မှုအရှိဆုံး သန္ဓေတားနည်းများကို အသုံးပြု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ HIV ကူးစက်ရောဂါနှင့် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူး စက်တတ်သောရောဂါများအား ကာကွယ်နိုင်မှု ရှိ/မရှိကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သန္ဓေတားနည်း အများစုသည် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင် စွမ်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖော်ဟု ခေါ်ဆိုကြသော ကွန်ဒုံးများက ကူးစက်ရောဂါများကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဖော်ကို အဖိုသုတ်ကောင်သတ်ဆေးရည် (Spermicide) များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိပါသည်။ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
မိမိရွေးချယ်သည့် သန္ဓေတားနည်းလမ်းသည် ဆရာဝန်ညွှန်မှ အသုံးပြု၍ ရနိုင်သလား၊ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အခမဲ့ အလွယ်တကူ ရနိုင်သလား၊ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်သလား စသည်တို့ အပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များအပေါ် မူတည်၍ မိမိနှင့် သင့်လျော်သည့် သန္ဓေတားနည်းကို စနစ်တကျ စဉ်းစားရွေးချယ် အသုံးပြုခြင်းသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို ရှောင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ သန္ဓေတားနည်းလမ်းများစွာကို စုစည်း၍ အဓိကအားဖြင့် အုပ်စုသုံးစုခွဲ၍ ပြောနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
(က) ကွန်ဒုံး ကွန်ဒုံးတွင် အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော ကွန်ဒုံး(အဖော်)နှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော ကွန်ဒုံးဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လိင်ဆက်ဆံသည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် အမျိုးသား ကွန်ဒုံး (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံး တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုရပါမည်။ ကွန်ဒုံးကို ဆေးဆိုင်များတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင် ပါသည်။ အချို့ ဆေးခန်း များတွင် အခမဲ့ ပေးဝေလေ့ ရှိပါသည်။
(ခ) သားအိမ်ခေါင်းဖုံး သားအိမ် ခေါင်းဖုံးသည် ကွေးခေါက်၍ရသော သားရေ အဖုံးဖြစ်ပြီး အဖို သုတ်ပိုးကို သေစေနိုင်သည့် ကရင်မ် သို့မဟုတ် ဂျယ်လီ သုတ်လိမ်းထားပါသည်။ အဖိုသုတ်ကောင်များ သားအိမ်ခေါင်းသို့ မရောက်စေရန် အတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုမီတွင် သားအိမ်ခေါင်းဖုံးကို သားအိမ်ခေါင်းတွင် တပ်ဆင် ထားရပါသည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးသောအခါ ချက်ချင်း ပြန်မထုတ်ရပါ။ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီခန့်ကြာအောင် ဖုံးထားရပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းဖုံးကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက မိမိနှင့်သင့်တော်သော အရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားကို ကျွမ်းကျင်သော သူ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းဖုံး အသုံးပြု ခြင်းကြောင့် သားရေ သို့မဟုတ် ဂျယ်လီနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ယောင်ယမ်းယားယံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆီးလမ်း ကြောင်းပိုးဝင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး များစေပါသည်။ အချို့သောသူများတွင် သားအိမ်ခေါင်းဖုံးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ မဖြုတ်ဘဲ ထားမိပါက (Toxic shock syndrome) ဟုခေါ်သော အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ဂ) သုတ်ပိုးသတ်သည့်ဂွမ်း သုတ်ပိုးသတ်သည့် “ဂွမ်း” ဆိုသည်မှာ နူးညံ့သော စက်ရုံထုတ်ဂွမ်းဖြစ်ပြီး သုတ်ပိုးသတ်သည့် ဆေးရည်ဖြင့် စိမ်ထား ပါသည်။ လိင် ဆက်ဆံခြင်း မပြုမီ သုတ်ပိုး သတ်သည့် ဂွမ်းကို စွတ်စိုအောင် ပြုလုပ်၍ အမျိုးသမီး အင်္ဂါအတွင်းရှိ သားအိမ်ခေါင်း အ၀အနီးသို့ ထည့်သွင်းထားရပါမည်။
၂။ ဟော်မုန်းဓာတ်ဖြင့် သန္ဓေတားခြင်း ဟော်မုန်းဓာတ်ပါဝင်သော သန္ဓေတားဆေးများတွင် ပရိုဂျက်စတင် တစ်မျိုးတည်းပါသော သန္ဓေတားဆေးများ ရှိသကဲ့သို့ ပရိုဂျက်စတင်နှင့် အီထရိုဂျင် နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သော ဆေးလည်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ သားဥ အိမ်မှ သားဥကြွေကျခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ ပရိုဂျက်စတင် တစ်မျိုးတည်းပါဝင်သော ဆေးများသည် အမျိုးသမီး၏ သားအိမ်ခေါင်း အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ သဘာဝအတိုင်း ထွက်ရှိသော အကျိအချွဲများကို ပိုမို ထူပျစ်စေးကပ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၏ သုတ်ပိုးများအား အမျိုးသမီး၏ သားအိမ်အတွင်းသို့ မ၀င်ရောက်နိုင်အောင် တားဆီးပေးပါသည်။ ပရိုဂျက်စတင် ပါဝင်သောကိရိယာ (Implant) ကို ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားအောက်တွင် ခွဲစိပ်ထည့်သွင်းရသည့် နည်းလမ်းလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းကိရိယာမှ ပရိုဂျက်စတင် ပမာဏကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားပေးပါသည်။ တစ်လခံဆေး၊ သုံးလခံဆေး စသည်ဖြင့် အလွယ်တကူခေါ်ကြသော ဒီပို (Depo Injection) ဆေးများကို ကြွက်သား အောက်သို့ တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးလတစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားနိုင်ပါသည်။ ဒီပိုထိုးဆေးသည် ပရိုဂျက်စတင် ပါဝင်သော ထိုးဆေးဖြစ်ပါသည်။ အရေပြား ပေါ်တွင် ကပ်ခွာ ပုံစံဖြင့် ကပ်ထား နိုင်သည့် သန္ဓေတား နည်းလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းကပ်ခွာမှ ပရိုဂျက် စတင်နှင့် အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း ဓာတ်များကို အဆက်မပြတ် ထုတ်လွှတ် ပေးခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားပေး ပါသည်။ အခြားသော ဟော်မုန်း တားဆေးများ ကဲ့သို့ပင် ကပ်ခွာ ပုံစံသည်လည်း ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြု ရပါမည်။ Vaginal Ring ဟုခေါ်သည့် ဟော်မုန်း ဓာတ်ပါသော ကွင်းငယ်အား အမျိုးသမီး အင်္ဂါအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားနိုင် ပါသေးသည်။ ၎င်းကွင်းငယ်မှ ပရိုဂျက်စတင်နှင့် အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း ဓာတ်နှစ်မျိုးလုံး ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ်တားဆေး ဟုခေါ်ဆိုသည့် Emergency Pill များသည်လည်း ဟော်မုန်းဓာတ်ဖြင့် သန္ဓေတားသောဆေးများ ဖြစ်ပါသည်။ Intra Uterine Device (IUD) ဟုခေါ်သည့် သန္ဓေတား ပစ္စည်း များလည်း ရှိပါသည်။ IUD သည် သေးငယ် သော ပလတ်စတစ် (သို့မဟုတ်) ကော့ပါး ကိရိယာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ IUD ကို အမျိုးသမီး၏ သားအိမ်ခေါင်း အား ဖြတ်သန်းကာ သားအိမ် အတွင်းသို့ ရောက်အောင် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များမှ ထည့်သွင်း ပေးပါသည်။ အချို့သော IUD များတွင် ပရို ဂျက်စတင် ဟော်မုန်း ပမာဏ အနည်းငယ် ထုတ်လွှတ် ပေးအောင် ဖန်တီး ထားပါသည်။ IUD တစ်ကြိမ် ထည့်သွင်း ထားလျှင် ၅နှစ်မှ ၁၀နှစ်အထိ သန္ဓေတား ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ IUD အသုံးပြု ခြင်းသည် ထိရောက်သော သန္ဓေတား နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ IUD နည်းဖြင့် သန္ဓေတားလျက် ကိုယ်ဝန် ရရှိနှုန်း တစ်နှစ် အတွင်း၌ အမျိုးသမီး (၁၀၀)တွင် (၁) ယောက် ထက် နည်းပါသည်။ ဆိုးကျိုး အနေနှင့် ဆီးစပ် ကိုက်ခြင်း၊ သွေးဆင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အခန့်မသင့်လျှင် သားအိမ်ပေါက် ခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ ပရိုဂျက်စတင် ဟော်မုန်း ထည့်သွင်း ထားသော IUD များသည် သားအိမ် အတွင်း ထည့်သွင်း ပြီးနောက် အချိန်မှန် မဟုတ်ဘဲ သွေး အနည်းငယ် ဆင်းနိုင် ပါသည်။ ၎င်းသန္ဓေ တားနည်း အသုံးပြုသူ အမျိုးသမီး ဦးရေ၏ ထက်ဝက်ခန့်တွင် IUD ထည့်ပြီး တစ်နှစ်ကြာသောအခါ သွေးပေါ်ခြင်း လုံးဝမရှိတော့ပါ။ IUD ကို ပြန်ထုတ် လိုက်လျှင် သွေးပေါ်ပါသည်။
၃။ သားကြောဖြတ်ခြင်း အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီး ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦး စလုံးဖြစ်စေ နောင်အနာဂတ်တွင် ကလေး မယူတော့ရန် သေချာ သောအခါ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသား၏ ကပ္ပါယ်အိတ် အတွင်းမှ သုတ်ပြွန် တစ်ခုကို ဖြတ်တောက်ခြင်း (Vasectomy) ဖြင့် အမျိုးသားအား တစ်သက်လုံး ကလေးမရစေရန် ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီး၏ ၀မ်းဗိုက် ကိုဖွင့်၍ သားအိမ်၏ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်မှ သားဥ ပြွန်နှစ်ချောင်း ကို ဖြတ်တောက် ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအား တစ်သက်လုံး ကလေး မရစေရန် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၄။ မမှန်ကန်သောနည်းလမ်းများ တချို့ အမျိုးသား များသည် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး သုတ်လွှတ်ကာနီးတွင် အမျိုးသမီး အင်္ဂါတွင်းမှ ထုတ်ကာ သုတ်လွှတ်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေး မရနိုင်ဟု မှားယွင်းစွာ မှတ်ယူ တတ်ကြ ပါသည်။ သုတ်လွှတ်ခြင်း မပြုလုပ်မီ အမျိုးသား အင်္ဂါမှ ထွက်သော အကျိအချွဲတွင် သုတ်ကောင် အနည်းငယ် ပါဝင် နိုင်ပြီး ထိုပမာဏသည် အမျိုးသမီးအား ကိုယ်ဝန် ရရှိစေ နိုင်ပါသည်။ တချို့သော စုံတွဲများတွင် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ပြီးသောအခါမှ ပြီးလျှင်ပြီးချင်း အမျိုးသမီး အင်္ဂါဇာတ်ကို ရေဆေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ဟု မှားယွင်းစွာ မှတ်ယူ တတ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားမှ သုတ်လွှတ်ပြီး စက္ကန့် (၉၀)အတွင်း၌ သုတ်ကောင်သည် သားအိမ်ခေါင်းကိုဖြတ်ကာ သားအိမ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ရေဆေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန် ရရှိခြင်းကို မတားဆီးနိုင်ပါ။ ကလေးမွေးပြီး ကလေးအား အမေနို့ တိုက်နေစဉ် ကာလ အတွင်း လိင်ဆက်ဆံလျှင် ကလေး မရနိုင်ဟု ယူဆသူများ ရှိပါသည်။ ကလေးအား နို့တိုက် နေသည့် ကာလအတွင်း လိင်ဆက်ဆံပါက ကိုယ်ဝန် ရရှိ နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ ကလေး မလိုချင်သော မောင်နှံများ မမှန်ကန်သော အယူအဆ များကို ရှောင်ကြဉ်ကာ စနစ်ကျသော သန္ဓေ တားနည်း များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ အထက် တွင် ဖော်ပြခဲ့သော သန္ဓေ တားသည့် နည်းလမ်းများ အကြောင်း ပိုမို သိရှိ လိုပါက တတ်ကျွမ်း နားလည်သည့် သားဖွား မီးယပ် အထူးကု ဆရာ ၀န်ကြီးများနှင့် ဆက်လက် တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သန္ဓေတားနည်း တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံး မပြုဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိ လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ကွန်ဒုံး အသုံး ပြုသော်လည်း ကွန်ဒုံး ပေါက်ပြဲခြင်း ဖြစ်ခဲ့လျှင်သော် လည်းကောင်း (၇၂) နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သင့်ပါ သည်။ စာဖတ် ပရိသတ်များ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် သန္ဓေတားနိုင်ကြပါစေ။
သန်ဓတေားခွငျး နညျးလမျးပေါငျး မြားစှာရှိပါသညျ။ မညျသညျ့နညျးလမျးဖွငျ့ သန်ဓတေားမညျကို ဆုံးဖွတျသော အခါ မိမိ၏ ကနျြးမာရေး အခွအေနေ၊ လိငျဆကျဆံသညျ့ အကွိမျရနှေငျ့ ကလေးလိုခငျြစိတျရှိ/မရှိ စသညျ့ အခကျြ မွောကျမွားစှာပျေါ မူတညျ၍ ဆုံးဖွတျ ရပါသညျ။
သန်ဓတေားနညျး တဈခုခုကို ရှေးခယျြ တော့မညျဆိုလြှငျ မိမိ ရှေးခယျြမညျ့ နညျးလမျးသညျ ထိရောကျမှု ရှိရဲ့လားဟု စတငျ စဉျးစားရပါမညျ။
မိမိ ရှေးခယျြမညျ့ နညျးလမျးသညျ ကိုယျဝနျမရစရေနျ မညျမြှ ကာ ကှယျပေးနိုငျ မညျလဲ။ ဤအခကျြကို သိရှိရနျ အတှကျ မိမိရှေးခယျြမညျ့ သန်ဓေ တားနညျးကို အသုံးပွု လကျြရှိသော အမြိုးသမီးဦးရေ (၁၀၀)ကို လလေ့ာ ကွညျ့ရပါမညျ။ တဈနှဈ ကွာသောအခါ အမြိုးသမီးဦးရေ (၁၀၀) အနကျ ဦးရေ မညျမြှတှငျ မလိုခငျြဘဲ ကိုယျဝနျရရှိ သှားသညျကို သိရှိရနျလိုပါသညျ။ မလိုခငျြဘဲ ကိုယျဝနျရရှိသူ အရအေတှကျ မြားလြှငျ သငျရှေး ခယျြမညျ့ နညျးလမျးသညျ ထိရောကျမှုနညျးသညျဟု ကောကျခကျြ ခရြပါမညျ။ မလိုခငျြဘဲ ကိုယျဝနျရရှိသူ အရအေတှကျ နညျးလြှငျ သငျရှေးခယျြမညျ့ နညျးလမျးသညျ ထိရောကျမှု ရှိသညျဟု ကောကျခကျြ ခရြပါမညျ။
အကယျ၍ သငျတို့ စုံတှဲသညျ မရညျရှယျဘဲ ကိုယျဝနျ ရရှိခွငျးကို လုံးဝ လကျမခံ နိုငျသော သူမြား ဖွဈပါက ထိရောကျမှု အရှိဆုံးသော သန်ဓတေား နညျးလမျးကို အသုံးပွု သငျ့ပါသညျ။ အကယျ၍ သငျတို့စုံတှဲသညျ ကိုယျဝနျ ရခွငျးကို ရှောငျရှားလိုသညျ။ သို့သျော မရညျရှယျဘဲ ကိုယျဝနျ ရရှိလာ ပါကလညျး ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ လကျခံနိုငျ သညျဆိုပါက ထိရောကျမှု နညျးပွီး သကျသောငျ့သကျသာ ရှိသော သန်ဓတေား နညျးလမျး ကို အသုံးပွု နိုငျပါသညျ။
မိမိ အသုံးပွု လိုသညျ့ သန်ဓတေား နညျးလမျးသညျ ထိရောကျမှု ရှိ/မရှိ ရှေးခယျြ ဆုံးဖွတျ ပွီးသောအခါ နောကျတဈဆငျ့ အားဖွငျ့ ကုနျကြ စရိတျကို စဉျးစား ရပါမညျ။ ကုနျကစြရိတျသညျ ရရှေညျတှငျ မိမိ တတျနိုငျသညျ့ ပမာဏ အတှငျး ရှိနရေနျ လိုအပျ ပါသညျ။ နောကျထပျ စဉျးစားရနျ တဈခုမှာ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျမှု ရှိ/မရှိ ဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ- အသကျ (၃၅)နှဈ ကြျောနပွေီ ဖွဈသော အမြိုးသမီးသညျ ဆေးလိပျ သောကျတတျသူ အမြိုးသမီး ဖွဈပါက သန်ဓတေား သောကျဆေးမြား သုံးစှဲရနျ မသငျ့လြျောပါ။ အမြိုးသား ဖွဈသူ၏ အခွအေနေ ကိုလညျး ထညျ့သှငျး စဉျးစား ရပါမညျ။ သငျ၏ အမြိုးသားသညျ သငျရှေးခယျြ သော သန်ဓတေားနညျးလမျးကို ကနြေပျလကျခံသူဖွဈပါက သငျ့အဖို့ ရှေးခယျြရ လှယျကူ ပလေိမျ့မညျ။
သန်ဓေ တားနညျးကို ဘယျလောကျကွာကွာ အသုံးပွုမညျဟူသော သငျ၏ဆုံးဖွတျခကျြသညျ သငျရှေးခယျြမညျ့ သန်ဓေ တားနညျးလမျးအပျေါ သကျရောကျမှုရှိပါသညျ။ သငျသညျ ယာယီသန်ဓတေားလိုပါက ထိရောကျမှု နညျးသော နညျးလမျးမြား ကို အသုံးပွုရမညျဖွဈပွီး တဈသကျလုံး သန်ဓတေားလိုသညျဆိုပါက ထိရောကျမှုအရှိဆုံး သန်ဓတေားနညျးမြားကို အသုံးပွု နိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။ HIV ကူးစကျရောဂါနှငျ့ လိငျမှတဈဆငျ့ကူး စကျတတျသောရောဂါမြားအား ကာကှယျနိုငျမှု ရှိ/မရှိကိုလညျး ထညျ့သှငျး စဉျးစားရနျ လိုအပျပါသညျ။
သန်ဓတေားနညျး အမြားစုသညျ ကူးစကျရောဂါမြားကို ကာကှယျနိုငျ စှမျးမရှိပါ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အဖျောဟု ချေါဆိုကွသော ကှနျဒုံးမြားက ကူးစကျရောဂါမြားကို အထိရောကျဆုံး ကာကှယျပေးနိုငျပါသညျ။ အဖျောကို အဖိုသုတျကောငျသတျဆေးရညျ (Spermicide) မြားနှငျ့ တှဲဖကျအသုံးပွုပါက လိငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြားကို ကာကှယျရာတှငျ ပိုမိုထိရောကျမှု ရှိပါသညျ။ အလှယျတကူ ရရှိနိုငျမှုသညျလညျး အရေးကွီးပါသညျ။
မိမိရှေးခယျြသညျ့ သန်ဓတေားနညျးလမျးသညျ ဆရာဝနျညှနျမှ အသုံးပွု၍ ရနိုငျသလား၊ အဖှဲ့အစညျးမြားထံမှ အခမဲ့ အလှယျတကူ ရနိုငျသလား၊ ဝယျယူ အသုံးပွုနိုငျသလား စသညျတို့ အပျေါမူတညျ၍ ရှေးခယျြဆုံးဖွတျရမညျ ဖွဈပါသညျ။ အထကျဖျောပွပါ အခကျြမြားအပျေါ မူတညျ၍ မိမိနှငျ့ သငျ့လြျောသညျ့ သန်ဓတေားနညျးကို စနဈတကြ စဉျးစားရှေးခယျြ အသုံးပွုခွငျးသညျ မရညျရှယျဘဲ ကိုယျဝနျရရှိခွငျးကို ရှောငျရနျအတှကျ အကောငျးဆုံး အထောကျအကူ ဖွဈစပေါသညျ။ သန်ဓတေားနညျးလမျးမြားစှာကို စုစညျး၍ အဓိကအားဖွငျ့ အုပျစုသုံးစုခှဲ၍ ပွောနိုငျပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့မှာ -
၁။ အကာအကှယျ အသုံးပွုခွငျး (Barrier Method)
၂။ ဟိုမုနျးဓာတျဖွငျ့ သန်ဓတေားခွငျး (Hormonal Method)
၃။ သားကွောဖွတျခွငျး (Permanent Method) စသညျတို့ ဖွဈကွပါသညျ။
(က) ကှနျဒုံး ကှနျဒုံးတှငျ အမြိုးသားမြား အသုံးပွုသော ကှနျဒုံး(အဖျော)နှငျ့ အမြိုးသမီးမြား အသုံးပွုသော ကှနျဒုံးဟူ၍ နှဈမြိုးရှိ ပါသညျ။ ကိုယျဝနျရှိခွငျးကို ကာကှယျရနျအတှကျ လိငျဆကျဆံသညျ့ အကွိမျတိုငျးတှငျ အမြိုးသား ကှနျဒုံး (သို့မဟုတျ) အမြိုးသမီး ကှနျဒုံး တဈမြိုးမြိုးကို အသုံးပွုရပါမညျ။ ကှနျဒုံးကို ဆေးဆိုငျမြားတှငျ ဆရာဝနျ ညှနျကွားခကျြ မလိုဘဲ လှတျလပျစှာ ဝယျယူ ရရှိနိုငျ ပါသညျ။ အခြို့ ဆေးခနျး မြားတှငျ အခမဲ့ ပေးဝလေေ့ ရှိပါသညျ။
(ခ) သားအိမျခေါငျးဖုံး သားအိမျ ခေါငျးဖုံးသညျ ကှေးခေါကျ၍ရသော သားရေ အဖုံးဖွဈပွီး အဖို သုတျပိုးကို သစေနေိုငျသညျ့ ကရငျမျ သို့မဟုတျ ဂယျြလီ သုတျလိမျးထားပါသညျ။ အဖိုသုတျကောငျမြား သားအိမျခေါငျးသို့ မရောကျစရေနျ အတှကျ လိငျဆကျဆံခွငျး မပွုမီတှငျ သားအိမျခေါငျးဖုံးကို သားအိမျခေါငျးတှငျ တပျဆငျ ထားရပါသညျ။ လိငျဆကျဆံပွီးသောအခါ ခကျြခငျြး ပွနျမထုတျရပါ။ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီခနျ့ကွာအောငျ ဖုံးထားရပါသညျ။ သားအိမျခေါငျးဖုံးကို အသုံးပွုမညျဆိုပါက မိမိနှငျ့သငျ့တျောသော အရှယျအစားနှငျ့ အမြိုးအစားကို ကြှမျးကငျြသော သူ၏ ညှနျကွားခကျြဖွငျ့သာ အသုံးပွုသငျ့ပါသညျ။ သားအိမျခေါငျးဖုံး အသုံးပွု ခွငျးကွောငျ့ သားရေ သို့မဟုတျ ဂယျြလီနှငျ့ ဓာတျမတညျ့ခွငျးကွောငျ့ ယောငျယမျးယားယံခွငျးဖွဈနိုငျပါသညျ။ ဆီးလမျး ကွောငျးပိုးဝငျနိုငျရနျ အခှငျ့အရေး မြားစပေါသညျ။ အခြို့သောသူမြားတှငျ သားအိမျခေါငျးဖုံးကို အခြိနျကွာမွငျ့စှာ မဖွုတျဘဲ ထားမိပါက (Toxic shock syndrome) ဟုချေါသော အသကျအန်တရာယျရှိသညျ့ ရောဂါဖွဈနိုငျပါသညျ။
(ဂ) သုတျပိုးသတျသညျ့ဂှမျး သုတျပိုးသတျသညျ့ “ဂှမျး” ဆိုသညျမှာ နူးညံ့သော စကျရုံထုတျဂှမျးဖွဈပွီး သုတျပိုးသတျသညျ့ ဆေးရညျဖွငျ့ စိမျထား ပါသညျ။ လိငျ ဆကျဆံခွငျး မပွုမီ သုတျပိုး သတျသညျ့ ဂှမျးကို စှတျစိုအောငျ ပွုလုပျ၍ အမြိုးသမီး အင်ျဂါအတှငျးရှိ သားအိမျခေါငျး အဝအနီးသို့ ထညျ့သှငျးထားရပါမညျ။
၂။ ဟျောမုနျးဓာတျဖွငျ့ သန်ဓတေားခွငျး ဟျောမုနျးဓာတျပါဝငျသော သန်ဓတေားဆေးမြားတှငျ ပရိုဂကျြစတငျ တဈမြိုးတညျးပါသော သန်ဓတေားဆေးမြား ရှိသကဲ့သို့ ပရိုဂကျြစတငျနှငျ့ အီထရိုဂငျြ နှဈမြိုးလုံးပါဝငျသော ဆေးလညျးရှိပွီး အမြိုးသမီးမြား၏ သားဥ အိမျမှ သားဥကွှကေခြွငျးကို တားဆီးပေးပါသညျ။ ပရိုဂကျြစတငျ တဈမြိုးတညျးပါဝငျသော ဆေးမြားသညျ အမြိုးသမီး၏ သားအိမျခေါငျး အနီးတဈဝိုကျရှိ သဘာဝအတိုငျး ထှကျရှိသော အကြိအခြှဲမြားကို ပိုမို ထူပဈြစေးကပျအောငျ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ အမြိုးသား၏ သုတျပိုးမြားအား အမြိုးသမီး၏ သားအိမျအတှငျးသို့ မဝငျရောကျနိုငျအောငျ တားဆီးပေးပါသညျ။ ပရိုဂကျြစတငျ ပါဝငျသောကိရိယာ (Implant) ကို ခန်ဓာကိုယျ အရပွေားအောကျတှငျ ခှဲစိပျထညျ့သှငျးရသညျ့ နညျးလမျးလညျး ရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးကိရိယာမှ ပရိုဂကျြစတငျ ပမာဏကို စဉျဆကျမပွတျ ထုတျလှတျပေးခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားပေးပါသညျ။ တဈလခံဆေး၊ သုံးလခံဆေး စသညျဖွငျ့ အလှယျတကူချေါကွသော ဒီပို (Depo Injection) ဆေးမြားကို ကွှကျသား အောကျသို့ တဈလတဈကွိမျ သို့မဟုတျ သုံးလတဈကွိမျထိုးခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားနိုငျပါသညျ။ ဒီပိုထိုးဆေးသညျ ပရိုဂကျြစတငျ ပါဝငျသော ထိုးဆေးဖွဈပါသညျ။ အရပွေား ပျေါတှငျ ကပျခှာ ပုံစံဖွငျ့ ကပျထား နိုငျသညျ့ သန်ဓတေား နညျးလညျး ရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးကပျခှာမှ ပရိုဂကျြ စတငျနှငျ့ အီစထရိုဂငျြ ဟျောမုနျး ဓာတျမြားကို အဆကျမပွတျ ထုတျလှတျ ပေးခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားပေး ပါသညျ။ အခွားသော ဟျောမုနျး တားဆေးမြား ကဲ့သို့ပငျ ကပျခှာ ပုံစံသညျလညျး ဆရာဝနျ ညှနျကွားခကျြဖွငျ့သာ အသုံးပွု ရပါမညျ။ Vaginal Ring ဟုချေါသညျ့ ဟျောမုနျး ဓာတျပါသော ကှငျးငယျအား အမြိုးသမီး အင်ျဂါအတှငျးသို့ ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားနိုငျ ပါသေးသညျ။ ၎င်းငျးကှငျးငယျမှ ပရိုဂကျြစတငျနှငျ့ အီစထရိုဂငျြ ဟျောမုနျး ဓာတျနှဈမြိုးလုံး ထုတျလှတျပေးခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားနိုငျပါသညျ။ အရေးပျေါတားဆေး ဟုချေါဆိုသညျ့ Emergency Pill မြားသညျလညျး ဟျောမုနျးဓာတျဖွငျ့ သန်ဓတေားသောဆေးမြား ဖွဈပါသညျ။ Intra Uterine Device (IUD) ဟုချေါသညျ့ သန်ဓတေား ပစ်စညျး မြားလညျး ရှိပါသညျ။ IUD သညျ သေးငယျ သော ပလတျစတဈ (သို့မဟုတျ) ကော့ပါး ကိရိယာ တဈခု ဖွဈပါသညျ။ IUD ကို အမြိုးသမီး၏ သားအိမျခေါငျး အား ဖွတျသနျးကာ သားအိမျ အတှငျးသို့ ရောကျအောငျ ကြှမျးကငျြသော ဆရာဝနျမြားမှ ထညျ့သှငျး ပေးပါသညျ။ အခြို့သော IUD မြားတှငျ ပရို ဂကျြစတငျ ဟျောမုနျး ပမာဏ အနညျးငယျ ထုတျလှတျ ပေးအောငျ ဖနျတီး ထားပါသညျ။ IUD တဈကွိမျ ထညျ့သှငျး ထားလြှငျ ၅နှဈမှ ၁၀နှဈအထိ သန်ဓတေား ပစ်စညျးအဖွဈ အသုံးပွု နိုငျပါသညျ။ IUD အသုံးပွု ခွငျးသညျ ထိရောကျသော သန်ဓတေား နညျးတဈခု ဖွဈပါသညျ။ IUD နညျးဖွငျ့ သန်ဓတေားလကျြ ကိုယျဝနျ ရရှိနှုနျး တဈနှဈ အတှငျး၌ အမြိုးသမီး (၁၀၀)တှငျ (၁) ယောကျ ထကျ နညျးပါသညျ။ ဆိုးကြိုး အနနှေငျ့ ဆီးစပျ ကိုကျခွငျး၊ သှေးဆငျးခွငျးတို့ ဖွဈပျေါနိုငျပွီး အခနျ့မသငျ့လြှငျ သားအိမျပေါကျ ခွငျးမြိုး ဖွဈနိုငျ ပါသညျ။ ပရိုဂကျြစတငျ ဟျောမုနျး ထညျ့သှငျး ထားသော IUD မြားသညျ သားအိမျ အတှငျး ထညျ့သှငျး ပွီးနောကျ အခြိနျမှနျ မဟုတျဘဲ သှေး အနညျးငယျ ဆငျးနိုငျ ပါသညျ။ ၎င်းငျးသန်ဓေ တားနညျး အသုံးပွုသူ အမြိုးသမီး ဦးရေ၏ ထကျဝကျခနျ့တှငျ IUD ထညျ့ပွီး တဈနှဈကွာသောအခါ သှေးပျေါခွငျး လုံးဝမရှိတော့ပါ။ IUD ကို ပွနျထုတျ လိုကျလြှငျ သှေးပျေါပါသညျ။
၃။ သားကွောဖွတျခွငျး အမြိုးသားဖွဈစေ၊ အမြိုးသမီး ဖွဈစေ၊ နှဈဦး စလုံးဖွဈစေ နောငျအနာဂတျတှငျ ကလေး မယူတော့ရနျ သခြော သောအခါ ဤနညျးလမျးကို အသုံးပွု နိုငျပါသညျ။ အမြိုးသား၏ ကပ်ပါယျအိတျ အတှငျးမှ သုတျပွှနျ တဈခုကို ဖွတျတောကျခွငျး (Vasectomy) ဖွငျ့ အမြိုးသားအား တဈသကျလုံး ကလေးမရစရေနျ ပွုလုပျ နိုငျပါသညျ။ အမြိုးသမီး၏ ဝမျးဗိုကျ ကိုဖှငျ့၍ သားအိမျ၏ ဘေးတဈဖကျ တဈခကျြမှ သားဥ ပွှနျနှဈခြောငျး ကို ဖွတျတောကျ ခွငျးဖွငျ့ အမြိုးသမီးမြားအား တဈသကျလုံး ကလေး မရစရေနျ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။
၄။ မမှနျကနျသောနညျးလမျးမြား တခြို့ အမြိုးသား မြားသညျ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံပွီး သုတျလှတျကာနီးတှငျ အမြိုးသမီး အင်ျဂါတှငျးမှ ထုတျကာ သုတျလှတျလေ့ ရှိကွပါသညျ။ ဤသို့ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ ကလေး မရနိုငျဟု မှားယှငျးစှာ မှတျယူ တတျကွ ပါသညျ။ သုတျလှတျခွငျး မပွုလုပျမီ အမြိုးသား အင်ျဂါမှ ထှကျသော အကြိအခြှဲတှငျ သုတျကောငျ အနညျးငယျ ပါဝငျ နိုငျပွီး ထိုပမာဏသညျ အမြိုးသမီးအား ကိုယျဝနျ ရရှိစေ နိုငျပါသညျ။ တခြို့သော စုံတှဲမြားတှငျ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံ ပွီးသောအခါမှ ပွီးလြှငျပွီးခငျြး အမြိုးသမီး အင်ျဂါဇာတျကို ရဆေေးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျဝနျ မရနိုငျဟု မှားယှငျးစှာ မှတျယူ တတျကွပါသညျ။ အမြိုးသားမှ သုတျလှတျပွီး စက်ကနျ့ (၉၀)အတှငျး၌ သုတျကောငျသညျ သားအိမျခေါငျးကိုဖွတျကာ သားအိမျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျပွီး ဖွဈသညျ့အတှကျ ရဆေေးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျဝနျ ရရှိခွငျးကို မတားဆီးနိုငျပါ။ ကလေးမှေးပွီး ကလေးအား အမနေို့ တိုကျနစေဉျ ကာလ အတှငျး လိငျဆကျဆံလြှငျ ကလေး မရနိုငျဟု ယူဆသူမြား ရှိပါသညျ။ ကလေးအား နို့တိုကျ နသေညျ့ ကာလအတှငျး လိငျဆကျဆံပါက ကိုယျဝနျ ရရှိ နိုငျခွေ ရှိပါသညျ။ ကလေး မလိုခငျြသော မောငျနှံမြား မမှနျကနျသော အယူအဆ မြားကို ရှောငျကွဉျကာ စနဈကသြော သန်ဓေ တားနညျး မြားကို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ မရညျရှယျဘဲ ကိုယျဝနျရရှိခွငျးကို ရှောငျရှားသငျ့ပါသညျ။ အထကျ တှငျ ဖျောပွခဲ့သော သန်ဓေ တားသညျ့ နညျးလမျးမြား အကွောငျး ပိုမို သိရှိ လိုပါက တတျကြှမျး နားလညျသညျ့ သားဖှား မီးယပျ အထူးကု ဆရာ ဝနျကွီးမြားနှငျ့ ဆကျလကျ တိုငျပငျ သငျ့ပါသညျ။ အကယျ၍ သငျသညျ သန်ဓတေားနညျး တဈမြိုးမြိုးကို အသုံး မပွုဘဲ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံမိ လြှငျသျော လညျးကောငျး၊ ကှနျဒုံး အသုံး ပွုသျောလညျး ကှနျဒုံး ပေါကျပွဲခွငျး ဖွဈခဲ့လြှငျသျော လညျးကောငျး (၇၂) နာရီထကျ နောကျမကစြဘေဲ တတျနိုငျသမြှ ဆောလငျြစှာ ဆရာဝနျနှငျ့ အမွနျဆုံး တှဆေုံ့ဆှေးနှေး သငျ့ပါ သညျ။ စာဖတျ ပရိသတျမြား မှနျကနျသော နညျးလမျးမြားဖွငျ့ သန်ဓတေားနိုငျကွပါစေ။